Fandinihana paikady finday
Hevitra 10 momba ny tetika finday
Alatsinainy, 4 Jona, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Mikasa ny hanaiky ny fifandraisan'ny finday amin'ny fomba lehibe? Betsaka ny fiheverana izay tsy ampoizin'ny orinasa na miasa mba hampitomboana ny paikadin'ny findainy. Hamarino tsara ireto torohevitra manaraka ireto:
Teknolojia mirindra - Na dia mbola tsy tonga tanteraka aza ny teknolojia ho an'ny fidirana finday dia tokony ny orinasa apetrakao manodidina ny lampihazo miorina amin'ny rahona ny maritrano izay mampivondrona atiny, firaketana, fahana ara-tsosialy, angona data, serivisy SaaS, Analytics sy ny maro hafa.
Miantsoa hanao fihetsika - Mihazona izany na dia ho an'ny endrika fampiraisana nentim-paharazana mifantoka amin'ny fanaparitahana vaovao na fanentanana aza, fa bebe kokoa amin'ny fandraisana an-tanana ny finday izay misy ny mantra ho an'ny fahombiazana dia manome traikefa fanompoana mifantoka amin'ny asa. Mihodina ny fahendrena famolavolana mahazatra anao ary mamolavola bokotra fihetsika fa tsy endrika, mametraka ny fahombiazan'ny mpanjifa sy ny fandraisan'ny mpanjifa ny zana-tohana misy ny interface sy ny marika.
Analytics - Ny famolavolana finday dia mety mitaky ezaka be Analytics matetika lasa ambadika. Na izany aza, amin'ny fahasarotan'ny rindranasa finday sy ny fampidirana azy Analytics amin'ny alàlan'ny kitapon'izy ireo mpamorona rindrambaiko (SDKs) NA mampiditra mahazatra Analytics amin'ny efijery sarimiaina sy pejy mavitrika hisamborana hetsika dia mila mamela fotoana amin'ny kalandrie fampivoarana ianao hahalavorary ny raharaha.
Social Media - Avy amin'ny fahaizana miditra amin'ny alàlan'ny finday, amin'ny fampiharana fampiharana, hatramin'ny fizarana ara-tsosialy, ny sosialy dia singa lehibe amin'ny fampiasana finday. Ny fahombiazana farany amin'ny paikadim-pifandraisana finday dia miankina amin'ny famolavolana serivisy fandraharahana hifaneraserana amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifa na ny asany.
Local - SOMOLO dia tsy jargon-indostrialy fotsiny, Local Mobile eo an-toerana mamaritra ny fampiharana sy ny sokajy fampiroboroboana haingana indrindra amin'ny indostrian'ny finday. Na dia tsy eo an-toerana aza ny vokatrao na ny serivisinao, ny fampidirana ny jeografia amin'ny paikadin'ny findainao dia afaka mitarika hetsika bebe kokoa.
Hafatra an-tsoratra (SMS) mbola velona soa aman-tsara. Aza atao ambanin-javatra ny fahatongavany na ny valiny azo tratrarina amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra tena tsotra.
karazana verinia - Yahoo! mitatitra fa 20% amin'ny mpitsidika rehetra izao no mitsidika amin'ny finday… ary fantatray izany mailaka misokatra amin'ny finday manakaiky indroa izany. Raha tsy izany ianao famolavolana ny mailakao ho an'ny efijery kely, farafaharatsiny mba tsy mamaky ny olona… ary ny ratsy kokoa… mety tsy hamandrika.
Mobile Apps - aza adino ny maha malaza ny rindranasa finday hafa, toy ny Facebook, Youtube, fampiharana sary, fizarana mozika, Geolocation, sns. Ny fampidirana ireo rindranasa antoko fahatelo ao anaty rindranasao dia afaka manome tahan-jaza haingana anao raha vita tsara!
Screens kely mihalehibe… ary mampiseho fanapahan-kevitra avo kokoa. Ny famolavolana rindranasa mandray andraikitra izay manararaotra ny haben'ny efijery sy ny famahana dia hampitombo ny fampiasana sy ny firotsahana.
Security - Ireo hackers dia mirehareha foana hanafika finday marani-tsaina, ary mpijirika mampiasa marefo amin'ny fampiharana ny orinasanao hampiditra malware amin'ny telefaona finday no zavatra ilainao farany.
Ireo fomba ireo dia mety mitaky fomba vaovao Lehiben'ny manampahefana izay mandray anjara amin'ny asa aman-draharaha ifotony ary mijanona ho mahay mamoaka paikady fifandraisan'ny finday fa tsy "Chief Technology Officer" izay mitarika departemanta teknika manokana.
Tags: analytics amin'ny findayfamolavolana findayfinday-barotrasosialy findaypaikady finday
Fanaraha-maso SEO mora sy matanjaka
Lahatsary: ​​inona no atao hoe marika?
7 Jun 2012 amin'ny 11:12 AM
Ahoana ny iray manan-danja indrindra amin'ny rehetra: atiny ?!
Jun 7, 2012 ao amin'ny 7: 53 PM
Ireo dia fiheverana izay matetika tsy dia jeren'ny olona, ​​Michael. Tsy hiady hevitra mihitsy aho hoe ny atiny dia # 1.
8 Jun 2012 amin'ny 4:23 AM
Misaotra ny valinteninao Douglas. Ny fiheverana stratejika lazainao dia sarobidy. Fa raha ny zavatra niainako dia tsy mitandrina amin'ny atiny koa ny olona: - / Miorina amin'ny teknika, fitaovana, fantsona sns ny zava-dehibe. Fa ny atiny lehibe dia ny zava-drehetra. Misaotra & tsara indrindra, Michiel